Xoghayaha Arimaha Bulshada Xisbiga Waddani Maxamed Sidiiq Dhamme ayaa qoraalkani qoray :-
Safiirka dawladda Ethiopia Somaliland u fadhiya waa in uu dacwad ku soo ooga Taliyaha Booliska Somaliland.
10 Gabood fal oo kale ayaa qoraalkan ku jira, Oramadu ma xayawaanba, ma dameera, miyaanay dad bini’aadam ah aheyn? haddii dalka ay joogaan miyaanay dawladdu Amnigooda iyo xuquuqdooda ka Mas’uul aheyn? Askariga yaa siiyey Awooda uu qof dumar ah ku qaraacayo? Askariga yaa siiyey in uu suuqa bartankiisa qof dumar ah ku qaawiyo ma Sharci bileyska u gaar ahba? ma diinnteena banneysay?
Haddii tooda loo raaco oo ay Askariga amarkiisa ka hor timid ma in uu gacan qaada qof shicib ah isaga oo direyski booliska xidhan? Dawladnimadeena diinteena iyo dadnimadeena miyaanay ceeb ku aheyn ficilkani?
Qoraalka Boolisku kaga jawaabay arintan miyaanu ka hor imaneynin xeerarka xuquuqal aadamaha dunida ee Somaliland dastuurkeedu ayiday dawladdii Somaliyana saxeexday (Interntional Human Rights Convention) Oo sheegaya in dadku siman yahay?
Goormay Oramadu cay iyo ceeb noqotay? Safiirka dawladda Ethiopia waa in uu dacwad ku soo oogaa Jananka Booliska Somaliland Booliski shaqadiisi fawdo yay innaga noqon, mastaafurinta ajaanibka waxa ku shaqale ciidanka laanta socdaalka si aan jidh dil iyo hatigaad lahayn oo waafaqsan sharciga ayaa loo sameeyaa.
Previous articleTaliska Booliska Somaliland Ayaa Xidhay Askari Ka Tirsan Ciidanka Oo Tacadi Kula Kacay Gabadh
Next articleDaawo. Gudida joogta ah golaha wakiilada oo la kulmay mareeyaha laydka raashinka